Mpiara-miasa vehivavy ao amin’ny Star: nanampy ireo reny miteraka eny amin’ny Chumet - ewa.mg
Mpiara-miasa vehivavy ao amin’ny Star: nanampy ireo reny miteraka eny amin’ny Chumet
News - Mpiara-miasa vehivavy ao amin’ny Star: nanampy ireo reny miteraka eny amin’ny Chumet
Nanamarika ihany koa ny Andron’ny
vehivavy ireo mpiara-miasa vehivavy ao amin’ny Star. Nitondra
fanampiana ho an’ireo reny hiatrika fiterahana na ireo vao tera-bao
etsy amin’ny hopitalin’ny reny sy ny zaza (Chumet) etsy Tsaralalàna
izy ireo. Zon’ny rehetra ny misitraka fitsaboana, ary zo fotora
tokony hananan’ny reny reehtra kosa ny misitraka fikarakarana
mendrika mandritra ny fiterahana. Araka izany, nanolotra « kit
de naissance Eau Vive » ho an’ireo reny sy ny zaza latsaky ny
enim-bolana ao amin’ny Chumet ireto vehivavy mpiasan’ny Star ireto.
Efa niara-dalana amin’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza nandritra
ny 50 taona nisiany rahateo ny Eau Vive, ary mbola mitohy
hatramin’izao izany. Mbola mitohy hatrany ny fanomezana rano
isam-bolana ny hopitaly, hisitrahan’ireo mpiteraka sy ireo marary.
Nisy ihany koa tamin’ity ny fanomezana fitaovana ho fiarovana
amin’ny aretina Covid-19.
L’article Mpiara-miasa vehivavy ao amin’ny Star: nanampy ireo reny miteraka eny amin’ny Chumet a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Ligue des champions d’Europe»: nihintsana ny Juventus-n’i Ronaldo
Tapitra teo amin’ny dingana ampahavalon-dalana ny dian’ny Juventus de Turin sy i Cristiano Ronaldo, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «Ligue des champions», taranja baolina kitra. Nandresy tamin’ny isa, 3 no ho 2, an’ny FC Porto ry zalahy taorian’ny fanalavam-potoana teo amin’ity lalao miverina, notanterahina ny talata lasa teo ity, saingy ny baolina maty an-tanin’olona no nahatafita ny Portiogey, efa nandresy 2 no ho 1 teo amin’ny fihaonana voalohany. Marihina fa efa nilalao 10 ny FC Porto, rehefa nahazo karatra mena, i Mehdi Taremi.Ho an’ny fihaonana iray, manohy ny lalany ihany koa ny Dortmund, rehefa nisaraka ady sahala 2 no ho 2 tamin’ny FC Seville. Nahazo ny tapakilany anefa ny Rainiboto, noho izy ireo efa nandresy tamin’ny isa, 3 no ho 2, nandritra ny fihaonana mandroso. Tompondaka L’article Kitra – «Ligue des champions d’Europe»: nihintsana ny Juventus-n’i Ronaldo a été récupéré chez Newsmada.
Maep sy Usaid Hay Tao: torolalana ho an’ny jono
Nampahafantarina, omaly, ny torolalana mikasika ny Drafi-panajariana ny jono eto Madagasikara avy amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep). Nanohana sy namolavolana azy ny sampandraharaha amerikanina misahana ny fampandrosoana Usaid Hay Tao, avy amin’ny vahoaka amerikanina.Mirakitra ny lamina sy ny paikady ho enti-mitrandraka maharitra ireo vokatra avy amin’ny jono ity drafi-panajariana ity. Efa voafaritra ao anatin’ny lalàna manan-kery ny fitantanana araka ny tokony ho izy ny harena anaty rano eto amintsika, mikasika ny fanjonoana, ny fametrahana ny rafitra ary ny fitarihana ny mpanjono ho lasa matihanina.Drafi-panajariana misahana toerana efatra no efa tafapetraka eto amintsika, nanomboka ny taona 2014. Ny drafi-panajariana ho an’ny helodranon’Antongily, ny an’ny faritra Melaky, ny an’ny faritra Batan (itambaran’ny helodranon’Ambaro, Tsimipaika, Ampasindava ary Nosy Be) ary farany, ny an’ny faritra Atsimo Andrefana. Nilaza ny tale jeneralin’ny Jono, i Bemanaja Etienne, fa tanjona ny hisian’ny drafi-panajariana ho an’ny faritra miisa 14, ahitana morontsiraka eto Madagasikara.Nambaran’ny talen’ny fandaharanasa Usaid Hay Tao, Ratsisompatrarivo Jean Solo, tsy nihambahamba izy ireo nanohana ny famolavolana ity torolalana ity satria zava-dehibe ny hisian’ny fitantanana mirindra sy maharitra ny harena anaty rano eto amintsika.Njaka A. Nahatratra 163.000 taonina ny vokatra avy amin’ny jono an-dranomasina teto Madagasikara, ny taona 2017. Manome ny 13%-n’ny vokatra aondrana any ivelany izany ary 7%-n’ny Vokatra anatiny ankapobeny (PIB). Manodidina ny 100.000 ny misehatra amin’ny asan’ny jono ka 85.000 ny mpanjono madinika ary 2.300 ny miasa amin’ny jono indostrialy.L’article Maep sy Usaid Hay Tao: torolalana ho an’ny jono a été récupéré chez Newsmada.
Le ministre Hajo Andrianainarivelo et la représentante résidente de la Banque Mondiale, Marie-Chantal Uwanyiligira, ont visité le chantier sur la RN44 pour constater de visu l’avancement des travaux de réhabilitation. Une visite conjointe des travaux de réhabilitation de la Route nationale n°44 a été réalisée, vendredi dernier par le ministre de l’Aménagement du territoire et des travaux publics, Hajo Andrianainarivelo, avec la représentante résidente de la Banque mondiale à Madagascar, Marie-Chantal Uwanyiligira. L’objectif, selon les deux parties, est de constater de visu l’avancement des travaux. D’après leurs propos, le MATP assurant la maîtrise d’ouvrage et la Banque mondiale en tant que bailleur de fonds du projet, sont satisfaits de la qualité des travaux. « Le lot 1 reliant Marovoay à Amboasary (PK20-PK60) est terminé à 66%, tandis que le lot 2 reliant Amboasary à Vohidiala a connu un retard de début des travaux vu l’état d’urgence sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 », a indiqué le MATP. D’après les informations, l’entreprise et la mission de contrôle vont rattraper le retard pour terminer les travaux de terrassement de ce tronçon avant la fin de l’année 2021. « Je sais comment le ministre travaille et je suis confiante, les calendriers des travaux seront respectés », a affirmé la représentante de la Banque mondiale. Antsa R. L’article Reconstruction de la RN44 : Bonne qualité des travaux, selon le MATP et la Banque mondiale est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Reconstruction de la RN44 : Bonne qualité des travaux, selon le MATP et la Banque mondiale a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Mpandraharaha vitsy monja na iray ny omen’ny fanjakana fahazoan-dalana hanondrana lavanila, araka ny fitarainan’ireo mpandraharaha sasany. Lasa anjakan’olon-tokana izany ny vidin’ny lavanila ka izy ihany ny mametra ny vidiny araka izay sitrapony. Tsy marina, hoy ireo mpandraharaha hafa ireo, fa ny vidin’ny lavanila any ivelany no misy olana, noho izany, tokony havela malalaka ny fifaninanana, toy ny amin’ny varotra rehetra. Ankoatra izay, mbola manjaka koa ny halatra lavanila any amin’ny faritra Atsinanana. Fehiny: matiantoka hatrany ny mpamboly.Noho ny toetr’andro sy ny faharatsian’ny masomboly, ratsy ny vokatra voanjo, telo taona izao, any amin’ny distrikan’i Vangaindrano. Mpamboly voanjo hatramin’izay ny kaominina maromaro any Vangaindrano, nidina nijery sy nihaona amin’ny tantsaha ny tetikasa Sylver miara-miasa amin’ny sampandraharan’ny fambolena sy ny fiompiana, ho fanatsarana ny vokatra avadika ho menaka. Hovaina ny fotoam-pambolena ary hatsaraina masomboly. Atao izay hiverenan’ny fahatsaran’ny vokatra tsy hahakivy ireo tantsaha.Misy ny fiaraha-miasa amin’ny diosezin’i Morondava momba ny fanadiovana ireo lakandrano manondraka velaran-tany azo volena, mirefy 1 200 ha, manome foto-tsakafo ho an’ny kaominina Analaiva. Natao karazana asa tana-maro izy io, niantsoana ireo tanora very asa tao amin’ny Sucoma mpamokatra siramamy. Misy lakandrano hafa an-dalam-panamboarana afaka manondraka velaran-tany any Bemanonga. Taona maro ny tsy niasan’ireo lakandrano ireo ka nahamaina fotsiny ny tany, nampiankin-doha ny tantsaha amin’ny vokatra avy any an-kafa. Antenaina fa ho ampy vary ny any an-toerana manomboka izao sy hamatsy ny faritra hafa.Nahita zezika biolojika ranony ny vondrona tanora mpikaroka, nanomboka taona 2019. Mety amin’ny karazam-boly rehetra afa-tsy ny vary eny an-tanimbary. Ankoatra vary an-tanety, mety aminy ny legioma, sy ny voankazo. Vita amin’ny fako organika sy ny singa natoraly samihafa, tsy misy akora simika mihitsy, hoy ireo mpikaroka. 200 litatra isan’andro izao no vita, mora ampiasana: atondraka fotsiny. Mampihena ny doro tanety, mampitombo ny vokatra sy mahatsara ny kalitao. Hitan’ny olona maro ny vokatra azo avy aminy, ary efa tonga amin’ny toerana maro.L’article Vaovao tambatra a été récupéré chez Newsmada.
Miantoka ny fiveloman’ny mponina anjatony maro ao amin’ny kaominina Ambalamanakana sy Ambatofitorahana, distrikan’Ambositra, ny fambolena géranium ahodina hanaovana lohamenaka (huile essentiel). Misy ny fandriampahalemana any an-toerana hatramin’ny nahavitana drafi-panajariana nahazoana alalana mamboly io karazan-kazo io. Mivondrona ao anatin’ny kaoperativa Hanitriniala ireo mpamboly, fianarana manodina lohamenaka sy mamerina ny ala. 30 000 fototra izao ny zana-kazo kininina nambolena sy arahi-maso any amin’io faritra io. Mihena ny doro tanety sy ny fanaovana saribao tato anatin’ny efa-taona.Mirongatra ny fihadiana tsy ara-dalàna volamena any amin’ny faritra Betsiboka, hatramin’ny nampiharana ny fihibohana. Betsaka ny manararaotra ny toe-javatra ankehitriny, ireo mpanam-bola mampiasa olona mitrandraka tsy ara-dalàna volamena any amin’ireo kaominina ambanivohitra maro ao anatin’ny faritra Betsiboka. Malalaka ny fivezivezen’ireo fiaran’olon-tsotra, misy amin’izy ireny ny manao trafika mitatitra volamena miakatra aty an-dRenivohitra. Tsiahivina fa tafakatra 200 000 Ar izao ny 1 g amin’ny volamena.Manaiky ny fandaminana ny mpivarotra ao Marovoay, mampihena ny ora fivarotana eny an-tsena, noho ny hamehana ara-pahasalamana. Manaiky ireo mpivarotra noho ny antony ara-pahasalamana ho fitsinjovana ny vahoakan’i Marovoay, ho an’ny fahasalamam-bahoaka, ka tsy tombontsoan’ny olom-bitsy no zahana fa ho an’ny rehetra, hoy ny solontenan’izy ireo. Manamafy ny fandraisana andraikitra ireo mpivarotra ireo hisorohana ny fihanaky ny valanaretina any Marovoay, faritra Boeny manontolo. Tambin’izany, matiantoka na mihena ny vola miditra amin’izy ireo, izay maro ny mpivarotra legioma sy trondro.L’article Vaovao tambatra a été récupéré chez Newsmada.
Nécrologie du 12 août 2021
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 12 août 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.